Warmurtiyeed laga soo saaray shirkii G7 iyo Donald Trump oo ka soo horjeestay – Radio Muqdisho
Warmurtiyeed laga soo saaray shirkii G7 iyo Donald Trump oo ka soo horjeestay
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa dafiray soo dhoweeyn uu horey u soo dhoweeyay war murtiyeed laga soo saaray dhammaadka shir madaxeedka wadamada G7 isagoo dalka Kanada ku eedeeyay waxa ugu ku tilmaamay “Daacad darro”.
Midowga Yurub ayaa sheegay in ay ku dhagan tahay war murtiyeedka ka sokoow go’aanka madaxweyne Trump kasoo baxay.
“Waxa aan taageersanahay ballanqaadyada laga sameeyay ee ku jira war murtiyeedka G7,” sidaasi waxaa laga soo xigtay ilo wareed sare oo kasoo baxay dalka.
Mr. Trump ayaa goor hore saxiixay bayaanka war murtiyeedka ay ku heshiiyeen dhammaan wadamada ku bahoobay Ururka G7 ka sokoow muranka ka taagan xagga ganacsiga.
Daawo Tartamayaasha Degmada Warta Nabadda oo caawa u soo gudbay wareegga afaraad ee tartanka “Muuqaal+SAWIRRO”
Ciidanka Xoogga Dalka oo burburyay Saldhigyo ay Alshabaab ku lahaayeen duleedka Kismaayo Khasaarana Gaarsiiyay+Sawiro